“ တရုတ်မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာလို့ လူ ၆၁ ထက်မနည်းသေခဲ့ပြီး😱😱 လူပေါင်း သုံးသိန်းကျော် နေရာပြောင်းခဲ့ရ”😱😱 •
14/06/2019 lin htet News 0
တရုတ်နိုင်ငံတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် ၆၁ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး….
လူပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ ခန့်ကို ဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရ….
တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ပွားမှုကြောင့်….
၆၁ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ ခန့်ကို ဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်….
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အ ရေး ပေါ် စီ မံ ခန့် ခွဲ မှု ရေး ရာ ဝန် ကြီး ဌာ န က နေ အိမ် ပေါင်း ၉၃၀၀ ခန့် ပြို ကျ ခဲ့ ပြီး….စိုက် ပျိုး ရေး မြေ ပေါင်း ၃.၇၁ သန်း ဟက် တာ ခန့် ပျက် စီး ခဲ့ ရ သည့် အ တွက် ဒေါ် လာ ၁.၉၃ ဘီ လျံ အ ထိ ဆုံး ရှုံး မှုများ ရှိ နေ ပြီ ဟု ဆို ခဲ့ သည်…..
လူ ၄၃၀၀ ခန့် ကို ရေ ကြီး ရေ လျှံ သည့် ဘေး မှ ကယ် ဆယ် ခဲ့ ရ ပြီး….အ ရှေ့ တောင် ပိုင်း ရှိ ကွမ် တုံ ပြည် နယ် မှစ ကာ ယန် ကျီး မြစ် အ ပေါ် ဘက် ပိုင်း တွင် တည် ရှိ သော…အ နောက် တောင် ပိုင်း ဒေ သ ၏ချုံ ကင်း မြို့ အ ထိ ရေ လွှမ်း မိုး လျက် ရှိ သည် ဟု သိ ရ သည်…..
“ တရုတျမှာ မိုးသညျးထနျစှာရှာလို့ လူ ၆၁ ထကျမနညျးသခေဲ့ပွီး😱😱 လူပေါငျး သုံးသိနျးကြျော နရောပွောငျးခဲ့ရ”😱😱
တရုတျနိုငျငံတှငျ မိုးသညျးထနျစှာရှာသှနျးကာရကွေီးရလြှေံမှုကွောငျ့ ၆၁ ဦးထကျမနညျးသဆေုံးပွီး….
လူပေါငျး ၃၅၀၀၀၀ ခနျ့ကို ဘေးကငျးရာသို့ရှပွေ့ောငျးပေးခဲ့ရ….
တရုတျနိုငျငံတောငျပိုငျးနှငျ့အလယျပိုငျးဒသေမြားတှငျ မိုးသညျးထနျစှာရှာသှနျးကာ ရကွေီးရလြှေံဖွဈပှားမှုကွောငျ့….
၆၁ ဦးထကျမနညျးသဆေုံးပွီး လူပေါငျး ၃၅၀၀၀၀ ခနျ့ကို ဘေးကငျးရာသို့ရှပွေ့ောငျးပေးခဲ့ရကွောငျး သိရသညျ….
တရုတျနိုငျငံ၏ အ ရေး ပျေါ စီ မံ ခနျ့ ခှဲ မှု ရေး ရာ ဝနျ ကွီး ဌာ န က နေ အိမျ ပေါငျး ၉၃၀၀ ခနျ့ ပွို ကြ ခဲ့ ပွီး…. စိုကျ ပြိုး ရေး မွေ ပေါငျး ၃.၇၁ သနျး ဟကျ တာ ခနျ့ ပကျြ စီး ခဲ့ ရ သညျ့ အ တှကျ ဒျေါ လာ ၁.၉၃ ဘီ လြံ အ ထိ ဆုံး ရှုံး မှုမြား ရှိ နေ ပွီ ဟု ဆို ခဲ့ သညျ…..
လူ ၄၃၀၀ ခနျ့ ကို ရေ ကွီး ရေ လြှံ သညျ့ ဘေး မှ ကယျ ဆယျ ခဲ့ ရ ပွီး…. အ ရှေ့ တောငျ ပိုငျး ရှိ ကှမျ တုံ ပွညျ နယျ မှစ ကာ ယနျ ကြီး မွဈ အ ပျေါ ဘကျ ပိုငျး တှငျ တညျ ရှိ သော…အ နောကျ တောငျ ပိုငျး ဒေ သ ၏ခြုံ ကငျး မွို့ အ ထိ ရေ လှမျး မိုး လကျြ ရှိ သညျ ဟု သိ ရ သညျ…..
ဝတ်မှုံရွှေရည်ကို အိမ်ထောင်အမြန်ကျဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ စင်ရော်မောင်မောင်